Deeviid Maaraagaa filannoo irra deebii ilaalchisuun 'doorsisa' irra ga'eef deebii kennan - BBC News Afaan Oromoo
Deeviid Maaraagaa filannoo irra deebii ilaalchisuun 'doorsisa' irra ga'eef deebii kennan
Goodayyaa suuraa IG qaama haqaa Deeviid Maaraagaa seeraa fi dambii biyyattii eegsisuuf ''gatii barbaadamu hunda kaffaluuf qophii dha'' jedhan
Manni Murtii Olaanaa ji'a darbe erga injifannoo Uhuuruu Keeniyaataa haqeen booda, doorsisni qaama haqaa Keeniyaa irratti baay'achaa dhufuu dura ta'aan waajjira haqaa himan.
Kun kan ta'es deeggartoota Mr Keeniyaataa Mana Murtii Olaanaa fuulduratti mormaa turan irratti poolisiin gaasi boossisu erga dhukaasaniin booda dha.
Hiriirri ''sodaachisaa'' kun ''qaama haqaa doorsisuuf yaadameeti'' jedhan Deeviid Maaraagaa ibsa isaaniitiin.
Manni Murtichaa erga filannoon ji'a darbee rakkoo irraa bilisa hin turre jedheen booda, irra deebiin akka geggeeffamu ajajee ture.
Kunis Onkololeessa 17'f qabamee jiraatus, Wiixata darbe kubbaaniyyaan Faransaay sirna filannoo elektirooniikii dhiyeessu yeroo jedhametti qaqqabsiisuuf rakkachuu akka malu ibsee ture.
Gamtaan paartiilee, NASA, filannoo irra deeebiin taasifamuuf karoorfatameen duratti waraqaa sagaleen itti kennamu akka haaraatti maxxansuu dabalatee, angawootni filannoo geggeessan akka ari'aman gaafataniiru.
Kibxata darbe, Mr Keeniyaataan, filannoon akka heerri mootummaa jedhutti guyyoota 60 keessatti ta'uu akka qabuufi Komishinii Bilisaa Filannoo fi Daangaawwanii Keeniyaatiin (IEBC) geggeeffamuun akka irra jiraatu dubbataniiru.
Murteen guutuu Mana Murtii Olaanaatiin dabarfame fi odeeffannoon gutuun filannoon darbe maaliif akka haqame ibsu Har'a ifa ta'a jedhamee eegama.
Goodayyaa suuraa Deeggartoonni Keeniyaataa manni murtichaa ''injifannoo keenya nu harkaa hateera'' jechuun himatu.
Mr Maaraagaan hiriira kaleessa taasifameef deebii yoo laatan, ofiisaanii dabalatee qaamni abbootii seeraa filatu heera mootummaa fi seeraa fi dambii biyyattii eegsisuuf ''gatii barbaadamu hunda kaffaluuf qophii dha'' jedhu.
Itti gaafatamaan Poolisii Booyineett hojjattoota haqaaf eegumsa gahaa gochuu dhabuu isaanii, bilbila kaasuu dhiisuun angawoonni haqaa, qabeenya fi falmattoonni balaaf akka saaxilaman godhaniiru jechuun ibsi isaanii kun himata.
Waaniyaamaa Cheebuusiiriitiin, BBC Afriikaa, Naayiroobii
Goodayyaa suuraa Deeggartoonni Uhuuruu Keeniyaataa gaafa Kibxataa hiriira mormii ba'an
Qaamni haqaa torban darban keessatti beektota siyaasaa gurguddoon qeeqamaa ture, ejjennoo akkasii qabaachuun isaa waan hin baramne dha.
Ibsi kun, Deeviid Maaraagaa abshaalummaa fi amanamummaa qabaniif Keeniyaanonni hedduu (deeggartoota Keeniyaataa osoo hin dabalin) kabaja isaaniif qaban akka dabalu taasisa.
Manni Murtii Olaanaa guyyoota 60 filannoo irra deebii taasisuuf kaa'us sababoota siyaasaa fi gufuuwwan loojistiiksiitiin milkaa'uu dhabuu mala.
Akka ogeessonni seeraa jedhanitti, rakkinoota kan biroo dabalatee ejjennoon kaadhimamtoonni laamaan qaban, filannoon hanga sadaasa 1 tti geggeeffamuu baannaan, biyyattiin rakkoo heera mootummaa guddaa keessa galuu dandeessi.